‘नेपाल रोड रेसिङ च्याम्पियनसिप २०१८ सम्पन्न’, आशुतोष र आशिक विजयी | Corporate Nepal
काठमाडौं । मोटर स्पोर्टस नेपालले आयोजना गरेको स्ट्रिट बाइक च्याम्पियनसिप ‘नेपाल रोड रेसिङ च्याम्पियनसिप २०१८’ सम्पन्न भएको छ । उक्त प्रतियोगिता टीभीएस अपाचे आरटीआर सिरिजको मूख्य प्रायोजनमा गत शनिबार सम्पन्न भएको हो ।
प्रतियोगितामा २०० सीसीतर्फ प्रशान्त जङ कार्की र १५० सीसी तर्फ विवेश श्रेष्ठ विजेता भएका छन् । सो च्याम्पियनसिपमा २०० सीसीतर्फ आशुतोष धन्जु फस्र्ट रनर अप र सुजन थापा सेकेन्ड रनर अप भए भने १५० सीसी तर्फ आशिक लामा फस्र्ट रनर अप र पविन कार्की सेकेन्ड रनर अप भएको आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतियोगितामा २०० सीसी क्याटागोरीमा बेस्ट राइडर रवि साह, मिस्टर प्रोपर सेफ्टी गियर्स गौराङ्ग प्रताप सिंह र मिस्टर पब्लिक च्वाइस राजकुमार कार्की भएका छन् । त्यसैगरी १५० सीसी क्याटागोरीमा बेस्ट राइडर च्यान्जी राजा जोशी, मिस्टर प्रोपर सेफ्टी गियर्स रितेश श्रेष्ठ र मिस्टर पब्लिक च्वाइस निसान न्यौपाने भएका छन् ।
सो प्रतियोगिता गुर्जधारास्थित भेइकल एकेडेमी एन्ड रिसर्च सेन्टरमा भएको थियो । प्रतियोगितामा १५० र २०० सीसीका स्ट्रिट बाइक कुदाइएको थियो । ६ सय मिटरको ट्रयाकमा फाइनल प्रतियोगिता ५ ल्यापमा सम्पन्न गरिएको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताको २०० सीसी क्याटागोरीमा ४७ जना र १५० सीसी क्याटागोरीमा ४८ जना गरी कुल ९५ राइडरको सहभागिता थियो ।
आयोजकले च्याम्पियनसिपमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने राइडरलाई क्रमशः ३० हजार, २० हजार र १० हजार नगद पुरस्कारका साथै शिल्ड र प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ ।
च्याम्पियनसिप विजेता मध्ये एक जना आगामी दिनमा हुने एसिया रोड रेसिङ च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने छन् । सहभागी खेलाडीहरुलाई टीभीएसका कुनै पनि बाइक खरिद गर्दा २० हजार रुपैयाँ छुट प्रदान गरिनुका साथै एक्सचेन्ज सुविधा समेत उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय भलिबल फागुन दुई गतेदेखि
नेपालमा पाराग्लाइडिङ विश्वकप हुने
प्रहरी महानिरीक्षक भन्छन्- आधुनिक प्रविधि नभएर अपराध अनुसन्धान गर्न गाह्रो भयो
केटीएमको नयाँ टीएनटी -१५० नेपाली बजारमा, बेनेलीको सबैभन्दा सस्तो
काठमाडौं महानगरले सीसी क्यामरा जडानका लागि तीन करोड दियो
आठौं अन्तर विद्यालय एथ्लेटिक्स मिट सम्पन्न, बाल्मिकी शिक्षा सदन प्रथम
नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने नयाँ पर्यटनमन्त्रीको तयारी, मान्दैमान्दैनौंः युनियन
सुनचाँदीको मूल्य फेरी बढ्यो, प्रतितोला एक हजारको वृद्धिले सुनको भाउ घट्ने छाँटकाट अझै देखिएन
रावा बैंकको ब्राण्ड एम्बासडरमा २०१९ की मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ नियुक्त
पैंतिस हजार सहकारीलाई पाँच हजारमा झार्ने बडालको जिकिर
२८ बाणिज्य बैंकले तिरे २७ अर्ब आयकर, लगानीकर्तालाई ४७ अर्बको बोनस
खरेलको १० महिने असफलताः जहाज उडाएर कमाई गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारसँग सहयोग माग्दै
७९ करोड तिर्न नसकेपछि सुमार्गीको लाइसेन्स खोसियो
मेलम्चीको पानी ल्याउन विज्ञ सल्लाहकार समुह गठन, को को परे मन्त्रीको रोजाईमा ?
सेयर बजारमा सामान्य सुधार
क्यासिनोका मजदुरप्रति राज्य किन यति धेरै अनुदार ? पीडित ९२२ जना बर्षौदेखि न्याय माग्दै